Kuunza Mota Kubva kuEU kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kuunza Mota Kubva kuEU kuenda kuUK
Isu tiri nyanzvi mukunyoreswa kweUK tichishandisa Chitupa Chekuenderana.
Unogona kutenga chitupa chako kubva kwatiri uye wochinyoresawo - sevhisi izere yekumira!
Kuunza mota yako kuUK kubva kuEurope?
Mota zhinji dzatinonyoresa kubva kuEurope dzinoendeswa kuUK nevaridzi vadzo uye vatove pano, zvinongoda kuti kunyoreswa kwekunze kugadziriswe neSitifiketi Chekuenderana, iyo VCA neDVLA. Tinogona kubata maitiro ese ekutakura mota yako kubva kune chero nhengo yenhengo yeEU kuenda kuUK kana zvichidikanwa.
Isu tinonyanya kutakisa mota nemugwagwa munzira dzakazara dzeinishuwarenzi dzekutakura, asi zvakare tinopa roll pane roll kubva pakutakura masevhisi kubva kune dzimwe nzvimbo dziri kure. Munguva yekufamba mota yako yakazara inshuwarisi uye muzviitiko zvakawanda ichaendeswa kunzvimbo yedu, zvisinei, vashoma vatengi vedu vanosarudza kuunzwa mota kwavari uye vanongoshandisa masevhisi edu kugadzirisa chero mapepa anodiwa neDVLA kunyoresa mota. Izvi zvinoenderana nezvinhu zvakawanda zvemota saka usazeze kupinda mukutaurirana kana usina chokwadi.
Kana iwe uchida kutyaira mota uchisvika muUnited Kingdom uye uchingoda masevhisi edu ekubata nemapepa. Ndokumbira utarise inishuwarenzi yekutyaira mota yako muUnited Kingdom. Zvinogona kunge zvisiri izvo asi usazeze kupinda mukutaurirana kana iwe ukada inishuwarenzi - tinoshandisa vanoverengeka veinishuwarenzi vanogona kusimbisa mota vachishandisa iyo VIN nhamba.
Chikwata chakanakisa chehunyanzvi chinoita kuti iyi kambani inyatsokurudzirwa. Ivo vanobata zvese nekukurumidza uye vanokuchengeta iwe uchiziviswa mune ese maitiro. Kubatana kwavo kunorumbidzwa uye vese vanhu vakanaka kudaro! Kwete kuzvidemba uye kusagadzikana! Ndinokutendai Mota Yangu Yekutumira kunze kwekubatsira kwako! "
- Opel Zafira anobva kuIE - Ireland
Motokari yako iri pasi pemakore gumi here?
IMPORT ZVINOFANIRA KWAZVIMOTO PASI PEMAKORE 10 GORE
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuEurope kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rose. Isu takavaka yakawandisa katarogu yemagadzirirwo uye mamodheru emota isu atinotora kunze saka anogona kukupa iwe nekukurumidza mutengo kukosheswa kweizvo yako yega mota inoda.
Nyanzvi kwazvo uye kutaurirana kwakanaka, zvese zvakaenda zvinoenderana nenguva yenguva chivimbiso pane yekutanga hurukuro. Basa rakanaka kwazvo rirambe rakadai.
-2016 Volkswagen Gorofu 1.6 TDi, LHD kubva kuR - Romania
IMPORT ZVINOTAURWA HEMOTO ANOPFUURA GUMI MAKORE
Mota dzinobva mukati meEU idzo dzinopfuura makore gumi zera rudzi mvumo yekusunungurwa. Izvi hazvireve kuti ivo havadi chero shanduko kana basa kuti ripedzwe vasati vanyoreswa - asi zvinoita kuti nzira yekunyoresa ive ine mwero zvakanyanya.
Chii chinobatanidzwa kupinza mota yako?
MuUnited Kingdom mota dzinofanirwa kuve 'dzakakodzera nzira' uye ivo vachazoda MOT kuratidza kuti ivo vakakodzera kune chinangwa uye vakachengeteka.
Inotyaira mota ingangoda zvigadziriso zvidiki kugadzirisa iyo danda pateni kuona mwenje kuti isapofumadze vamwe vashandisi vemugwagwa Mwenje yemwenje yekumashure inodawo muUnited Kingdom, saka izvi zvinoda kukodzera kana mota isina imwe.
Nekudaro, zvese zvinogadziriswa zvinowanzoenderana nemotokari pachayo.
Isu takave nekukurumidza uye hushamwari sevhisi kubva kumota yangu yekungenisa uye taikurudzira hunyanzvi hwavo hwekubata zvese zvebhizinesi ravo ...
-1997 Toyota Hilux, 2.4 Diesel, Green, Pick Up kubva FR - France - Yaimbova mota UK
Yakawanda sei mutero wekunze kana uchipinza mota kubva kuEU kuenda kuUK?
Kutevera kupera kwenguva yeBrexit yekuchinja, mitemo yakasiyana inoshanda pamitero yekunze kana uchiunza mota kuUK.
Kana uri kutamira kuUK uye uine motokari yako kweinopfuura mwedzi mitanhatu uchigara kunze kweUK kwemwedzi inodarika gumi nemiviri, unogona kunze kwenyika mutero wemotokari usingabhadhari uchishandisa HMRC Transfer of Residency scheme.
Kana iwe wakatenga mota muEU uye woipinza kuUK, unobhadhara makumi maviri muzana VAT yekupinza kana uri pasi pemakore makumi matatu ezera, uye 20% VAT kana anopfuura makore makumi matatu ezera. Izvi zvinoverengerwa painvoice yako yekutenga uye chero mari yekufambisa kuenda kuUK.
Unogona here kubatsira nekufambisa mota yangu?
Zvisinei nekuti mota yako iripi tine chivimbo chekuti tinogona kupa yakachengeteka nepakati yekutakura mota yako.
Kunyangwe tiri kutumira mota kana kushandisa inland trucking isu tine huwandu hwakakura hwevamiriri vanogona kubatsira nedanho rekutora mota yako zvakachengeteka kuUnited Kingdom.
Nei uchisarudza isu kuti titore mota yako kubva kuEU KUENDA UK?
Kubva pakutakura mota yako kusvika pakuyedza uye kunyoresa - isu tinochengeta zvese. Zvese zvasara kuenderana yako nyowani UK manhamba mahwendefa uye isu tinogadzirira mota kugadzirira kungave kuunganidzwa kana kuendesa kunzvimbo yaunosarudza.
Isu tinongopinza mota kubva kuEU?
EU inoumba chikamu chakakura chekupinza mota kuUnited Kingdom, zvisinei kune zvakawanda zvakavanzika zvinotengwa kubva pasirese izvo isu zvatinobatsira nemwedzi wega wega.
Isu tinobatsira nekuchinjisa vagari vanoenda kuUnited Kingdom kubva kuAustralia, uye kunyange vanhu vega vekunze mota yechinyakare kubva kuUnited States of America.
Iko hakuna nzvimbo yatisingakwanise kuendesa uye kunyoresa mota kubva, saka usazeze kupinda mukutaurirana kana mota iri kunze kweEU.
Ndedzipi mhando dzemotokari dzatinoshanda nadzo?
Kubva kune imwechete-yekugadzira mota kusvika kumamirioni-pondo supercars isu takabatsira kunyoresa kuwanda kwemotokari dzakasiyana. Nzira yekunyoresa yakasiyana nemotokari yega yega asi tine chivimbo chekuti tinogona kubatsira.
Nzira yakanakisa yekuziva yechokwadi ndeyekuzadza fomu redu rekukumbira iro rinotipa zvese izvo zvatinofanira kuziva kuti tikupe quote chaiyo.
Tinogona kusevha mota yako? Kana isu tinopa chero sarudzo yekuwedzera?
Kusiyana nevakwikwidzi vedu, isu tiri kupfuura vanofara kuita chero zvakajairika kushandira mota dziri kushandisa nguva yavo panzvimbo yedu. Isu tinonzwa kuti kusevha mota yako chinhu chakanaka kuita kana mota dzichipedza yakawanda nguva isina basa.
Isu tinopawo nyanzvi inotsanangudza kuti ivandudze kutaridzika kwemota yako uye Thatcham yakayera trackers iyo inogona kudzikisira yako yakazara inishuwarenzi pakunyoresa.
Yangu Mota Kunze inofarira nezve mota uye isu tinovimba kuti chikumbiro chese chaungave nacho isu tinogona kuchizadzisa.
Iwe unofanirwa kuunza mota kunzvimbo yedu here?
Zvichienderana nezera remotokari isu tingangodaro tisingatombodi kuti iuye kunzvimbo yedu. Kana iyo mota yakura kupfuura makore gumi muzviitiko zvakawanda iwe unogona kuti zvigadziriswe zviitwe kune yemunharaunda garaji iyo inodikanwa kutevedzera.
Isu tinobva tatarisira chero mapepa chero akamirira iwe. Inochengetedza nguva uye zvinoreva kuti mota yako haidi kumbouya kuno.
Kana mota yako yakakodzera kunyoreswa kure saka isu tinokuzivisa iwe mushure mekuzadza fomu rekuti titore.
Ndeipi mitemo yekutora mota yako kwenguva pfupi?
Kana usiri kuronga kugara muUnited Kingdom kwenguva yakareba, uye mota yatove muEU saka unogona kushandisa mahwendefa ekunze usinganyore kana kubhadharisa mota yako kuUK.
Izvi zvinobvumidzwa chete kana iwe uchingoshanyira United Kingdom uye usaronge kugara kuno. Kune chero kupi kwekugara zvachose - kunyoreswa kwemotokari yako kunodiwa.
Imotokari inofanirwa kunyoreswa, kubvisirwa mutero, uye inishuwarenzi munyika yaakabva. Kukundikana kuita izvi kunogona kugadzira nyaya kana paine tsaona.
Motokari yako inogona kungogara muUnited Kingdom kwemwedzi mitanhatu. Kunyangwe kana iri yekushanya kushomeka kwenguva inopfuura yegumi nemaviri nguva iyo inogamuchirwa.
Kana iwe ukafunga kuchengetedza mota yako muUnited Kingdom kwenguva yakareba kupfuura iyoyo, ndapota usazeze kupinda mukutaurirana nezve kunyoreswa.
Ini ndoda kutyaira mota yangu apa iri kunyoreswa?
Kune huwandu hwakawanda hwedzimotokari husingade muyedzo weIVA isu hatidi kuve neyako EU mota onsite kune chero yakareba nguva. Isu takacherekedza kukura kuri kuitika muvatengi vakatyaira mota dzavo kuenda kuUnited Kingdom uye vanongoda yavo yekugadzirisa kutevedzera. Kana iwe uchiri kutyaira uchitenderedza pamahombekombe ekutanga ekunyoresa uye inishuwarenzi yako inokufukidza, saka tinogona kazhinji kukodzera mota yako ku 'Zuva rimwe chete kunyoreswa'.
Unounza mota yako kunzvimbo yedu muCastle Donington uye tinokwanisa kugadzirisa kuti mota yako ienderane nekushandisa muUnited Kingdom paunenge wakamirira. Izvo zvino zvinotorwa kunoongororwa MOT kuona kuti mota inokodzera mugwagwa uye kana pasina nyaya unozopihwa chitupa cheMOT.
Kana tangova neMOT chitupa chako unogona kutora mota, neako ekunze ekunyoresa mahwendefa. Tichaendesa kunyoresa kunyorera iwe uye kana nhamba yako nyowani yekugashira yatambirwa mahwendefa ekunze anogona kuchinjaniswa nemaGP ekunyora mahwendefa atinokutumira kwauri.
Iyo iri nyore nzira yekunyoresa yako EU mota kana iwe uchida kuishandisa zuva nezuva.
Kana iwe uri chinhambwe zvishoma uye usingakwanise kuenda kunzvimbo yedu asi mota yako yatove muUnited Kingdom isu tinogona zvakare kubatsira nekunyoreswa kwemotokari uye basa racho rinogona kuitiswa kugaraji riri munharaunda kwauri zvichienderana pane basa rinodiwa.
Nzira yakanakisa yekutsvaga nzira yekunyoresa ndeye nekoteti. Ichajekesa izvo zvinodiwa kunyoresa yako EU kupinza muUnited Kingdom.